Home AMERIKANINA STARS Erik Lamela tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bahoa bebe kokoa
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; "Coco". Ny tantaranay momba ny tantaram-pitiavan'i Erik Lamela sy ny tantaran'ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny laza, ny fiainam-pianakaviana ary ny zavatra tsy fantatra momba azy momba ny OFF-Pitch.
Eny, fantatry ny rehetra ny fahaiza-manaony, saingy vitsy no mihevitra fa ny Bio BioLala dia tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy adieu, dia aoka isika hanomboka.
Erik Lamela tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Voalohandohan'ny fiainana
Erik Lamela dia teraka tamin'ny andro 4 andro 1992 tany Carapachay, Arzantina.
Teraka tamin'ny reniny, Miriam Lamela sy rainy, José Lamela. Izy dia lehibe tao amin'ny faritanin'i Buenos Aires niaraka tamin'ny zokiny lahy, Brian ary zandriny lahy Alex.
Ny dadany, Jose izay mitovy Gabriel Batistuta ary ny mpankafy azy dia namporisika ny zanany lahy, Erik handray ny baolina kitra. Erik dia nanomboka baolina tamin'ny taona 5.
Rehefa tafiditra tao amin'ny River Plate izy tamin'izy fito taona, dia nanolotra an'i Lamela sy ny fianakaviany £ 100,000 isan-taona i Barcelona, ​​ary trano sy asa ho an'ny ray aman-dreniny, hifindra any amin'ny tanànan'i Barcelona. Izany dia fifametram-panahin'io ilay nahita Lionel Messi nifindra tany Espaina tamin'ny mbola kely.
Mahatsikaiky fa nanolotra ny tolotrasa ny ray aman-dreniny na dia teo aza ny tombotsoany voalohany tany Barcelona. I Erik ihany no naneho ny akanjon'ny Barcelone ho fanamafisana ny ray aman-dreniny. Raha ny marina, nanao ny antso farany ny ray aman-dreniny tamin'ny nandàvany an'i Barcelone tamin'ny laingany na ny faniratsirana.
Ao amin'ny 2004 ihany, a Trans World Sports mpilalao sarimihetsika dia nandeha tany Arzantina mba hiresadresaka tamin'ny Lamela 12 taona izay efa nitifitifitra taorian'ny filazalazany ny tanjona 120 ho an'ny Tanora River Plate ao anatin'ny fotoana iray monja. Taorian'ny nahazoany laza malaza ho mpilalao baolina kitra malaza, Lamela dia nanambara ny faniriany hanaraka ny dian'izy ireo Diego Maradona ary hahazo ny Mondialy ho an'i Arzantina. Teo am-pianarana dia tia tia milalao PlayStation izy.
Nanome toky i Lamela ny River Plate, klioba izay niarahany tamin'izy fito taona.
Ny tena fanerena dia avy amin'ny zava-misy fa vokatry ny tsy fahampian'ny fitantanana taona maro, raha ny filazàna fa misy kolikoly, ny kliobany dia sambany vao nifindra tao amin'ny tantaran'ny 110 taona ary ny 19-taona i Lamela Ilay lehilahy dia voavaha tamin'ny asa famonjena azy ireo.
Na dia teo aza ny ezaka tsara indrindra nataon'i Lamela, dia tsy tafavoaka velona tamin'ny farany ny klioba, ka nilaozan'ny tantara an-tsehatra izay nampisongadina ny fizotran'ny mpanohana azy.
Na izany aza, ny hazo dia tsy afaka manao ala. Nahazo trô, maro i Erik Lamela no fantatra fa andriamanitra kely football. Ny antony nandehanany tamin'ny fomba mahagaga nataony.
Ny fanenenan'i Lamela dia tonga tamin'ny fotoana nanombohany tamim-pahavitrihana tamin'ny asa aman-draharahany tamin'ny River Plate. Nanao kilalao 36 izy ary ny tanjona 4 ihany no nahavoa azy. Izany dia nitarika fanoherana bebe kokoa noho ny fandàvany FC Barcelona. Nanery ny lalany nankany Eorôpa izy tamin'ny fidirana tao Roma.
Lamela sy Romany vanim-potoana, dia niafara tamin'ny faharesen-dahatra tamin'ny fandripahana an'i Roma an'i Roma tamin'ny fifaninanana final Coppa Italia, miaraka amin'ny fahenina faha-enina ao amin'ny Series A, midika izany fa Roma dia tsy hilalao baolina eoropeana mandritra ny vanim-potoana faharoa. Izany dia nitarika ho amin'ny fialana an-tsehatra lavitra Tottenham. Ny sandam-bola ho an'i Lamela dia nanao azy ho mpilalao lafo indrindra amin'ny tantaran'ny klioba, £ 25.8 tapitrisa, ary mihoatra ny £ 4.2 tapitrisa amin'ny fandoavam-boninahitra.
Erik Lamela tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Relationship Life
Raha vehivavy ianao ary manambady lehilahy tanora, dia tsy ho ela dia hitodika any aminao izy, ary mety tsy hahasarika anao indray izy. Tsy izany no an'i Lamela izay efa niaraka tamin'ny zandriny vavy Sofia Herrero nandritra ny taona maro.
Tian'i Erik ny mitahiry ny fiainany manokana ho an'ny tena manokana. Mandany ny fotoana rehetra miaraka amin'i Sofia izay nomeny nandritra ny taona maromaro talohan'ny farany dia manambady azy amin'ny 2010.
Samy nanapa-kevitra ny tsy hanan-janaka ireo mpankafy roa ireo mandrapahatongan'ny 25th November 2017 rehefa teraka ny zanak'izy ireo i Tobias Lamela zanany.
Erik Lamela tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Etsy ankilany, i Erik dia tonga avy amin'ny fianakaviana Afrikana efa zokiny talohan'ny nanombohan'ny bolongana.
RAY: Ny rain'i Erik Lamela dia tena tsara tarehy nandritra ireo andro faran'izy ireo. Namoaka ny sarin'ny zandriny kely miaraka amin'ny rainy i Lamela, miaraka amin'ity marika manaraka ity: "Andro mahafaly ho an'ny ray rehetra indrindra indrindra ho ahy ... ny tsara indrindra
Ao amin'ny Instagram, mpankafy an'i Lamela nanolo-kevitra fa ny sarin'ny rainy tamin'ny andro faramparany dia nitovy tamin'ilay mpilalao an-tsehatra Argentine Gabriel Batistuta.
Mandritra izany, ao amin'ny Twitter, hardcore Tottenham mpanohana an'i Steve Nash nibitsika ny rohy Instagram ary nanontany tamim-pihetseham-po hoe raha ny rain 'i Lamela, David Ginola. Ny dadany dia efa antitra toy ny hita ao amin'ny sary etsy ambany.
rENY: Erik Lamela dia maka any amin'ny media sosialy mba haniry ny fankalazana ny fetin'ny reny sambatra ho an'ny Reny Tottenham'i draw with Liverpool.
rahalahiny avy; Erik Lamela dia manana rahalahy zokiolona mandeha amin'ny anarana; Brian Lamela. Brian dia tsy nokilasina ho an'ny baolina kitra amin'ny fotoana maha-fahazazany azy.
Anisan'ireo rahalahiny, ny zandriny lahy, Alex Lamela, sary etsy ambany, dia matetika no lohahevitra manan-danja.
Erik Lamela dia nahatsapa ny alahelony talohan'ny niverenany voalohany Tottenham miaraka amin'ny vaovao fa nalain'ny mpiara-mitantana mitam-piadiana tao an-tanànany tao Buenos Aires ny zandriny.
Araka ny tatitra avy any Italy, i Axel Lamela, 18 taona, dia nalaina am-piadiana ary nitazona ny vidim-panavotana.
Notazonina nandritra ny ora vitsivitsy izy talohan'ny namoahan'ny mpaka an-keriny tara amin'ny fifanakalozam-bola amin'ny 50000 pesos, izay mitovy amin'ny £ 5500 izay niaraka taminy. Na dia tsy fisehoan-javatra tsy mahazatra aza ny famaritana ireo fianakavian'ny mpilalao baolina kitra ataon'ny fianakavian'ireo mpilalao baolina kitra, mieritreritra ny polisy fa amin'ity tranga ity dia tsy fahita firy ny vokatr'ilay fiara mirehitra izay nitondran'ny 18 taona an'arivony.
Ny lahimatoan'i Erik Lamela, Brian Lamela niteny hoe: ... "Nolazain'izy ireo izahay mba hahazo ny vidim-panavotana ary hamela antoka fa tsy nandray anjara ny polisy. Tonga teo am-baravarana izy ireo mba hanangona ilay vola. Tsy nanarona ny tarehin'izy ireo izy ireo ary ny fakan-tsarimihetsika tao an-tranonay no nanoratra azy ireo. Mangina ny rahalahiko. Mieritreritra izahay rehetra fa zava-nitranga tsy nahy izany - naka an-keriny azy fotsiny ho an'ny fiara ary tsy misy zavatra hafa. "
Eto indray, Alex Lamela iray hafa ihany no nanosika ny lohany tamin'ny lozam-piaramanidina tao amin'ny teratany Arzantina. Ny fahavoazana dia fasana izay nahatonga ny paralysis. Nandritra ny volana vitsivitsy dia tsy afaka nanetsika zavatra i Alex. Fotoana marobe no nialany vao niverina ny hetsika. Nanomboka niasa isan'andro isan'andro izy mba hiverina amin'ny fiainana ara-dalàna. Tamin'ny fotoana nitrangan'ny loza, i Lamela dia nizaka olana tamin'ny fihokoana.
Erik Lamela tantaram-pitiavana bebe kokoa fantatry ny maro momba ny tantaram-piainany biography-Fiainana manokana
Erik Lamela aka 'Coco' dia manana ny toetrany amin'ny toetrany.
Ny tanjon'i Erik Lamala: Erik dia be fangorahana, artista, mavitrika ary malemy fanahy.
Ny fahalemen'i Erik Lamela: I Erik dia mety ho matahotra ary manana ny faniriana handositra ny zava-misy.
Inona no tian'i Erik Lamela: Erik Lamela dia tia irery. Tiany koa ny torimaso, ny mozika, ny romantique, ny haino aman-jery an-tsary, ny milomano ary ny ara-panahy.
What Erik Lamela tsy nankasitraka: Ireo olona milaza azy ho Fantany - izy rehetra, ny lasa dia niverina avy any an-tanindrazany (ohatra: mandà an'i FC Barcelona mandritra ny fahazazany) ary farany, habibiana ny karazana.
Erik Lamela dia vonona hatrany hanampy ny hafa, ary tsy manantena ny hahazo zavatra miverina. Ny fiainany dia miavaka amin'ny fiaraha-miory sy maneho fihetseham-po ara-pihetseham-po.
Erik Lamela tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bahoa bebe kokoa The Rabona
Erik Lamela indray namerina tanjona iray mahagaga tao anatin'ny fotoana iray mba hanaporofoana ny antony Tottenham dia nanafaka £ 30million noho ny asany. Tsy misy afa-tsy ny 20-yard 'rabona'tanjona ho an'i Spurs izay tonga tao amin'ny lalaon'i Europaa tamin'i Asteras Tripolis.
Mahagaga fa ny hany olona tsy nanetsika ny ezaka goavana dia ny mpitantana Mauricio Pochettino, izay tsy naneho fihetseham-po na dia teo aza ny fitsabahan'ny mpiasany ny tongony.
Ao amin'ny tenin'i Erik Lamela ao amin'ny Telegraph, hoy izy ..."Tiako ny miresaka momba ny fandrosoana sy ny fiaraha-miombon'antoka ary zava-dehibe kokoa izany. Tsy tiako ny miresaka zavatra toy ny 'rabona'. Fony mbola zazalahy aho, dia nianatra nanao izany ary nijanona fotsiny. Tsy zavatra efa nataoko fotsiny izany. Mazava ho azy izany. "
Erik Lamela tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bahoa bebe kokoa Tantara ratsy
Erik dia nanana volana mahatsiravina 13 iray teo anelanelany. Fotoana nanombohana ny ho aviny sy ny asany izany. Namazivazy ny tantaran'i Ricky Villa - Argentine iray izay akaikin'ny mpitantana ny klioba Mauricio Pochettino - indray mandeha dia nilaza fa nisy ny ahiahy tsy afaka nilalao intsony.
Raha nanontaniana izy raha matahotra ny hoaviny izy, hoy i Lamela:"Mazava ho azy. Amin'ny fotoan-tsarotra dia mieritreritra foana ny ratsy indrindra ianao. Saingy izaho sy ny fianakaviako dia niaraka tamiko ary ireo mpanohana ahy dia nitady ahy teo am-pitoerana. Manome hery ahy izy ireo hiasa isan'andro ary tsy handao na oviana na oviana. "
Izany no nolazainy rehefa niverina izy ...
"Mahatsiaro ho tsara aho raha miverina eny amin'ny lampihazo saingy diso fanantenana amin'ny vokatra. Mazava ho azy, afaka mahazo bebe kokoa kokoa aho. Ny volana lasa 13 dia adala, mety ho fotoana ratsy indrindra teo amin'ny fiainako izany. Te-hilalao aho fa tezitra mafy aho.
"Mahagaga ny mpitantana sy ny mpiasa rehetra. Niaraka tamiko foana izy ireo, tao aoriako. Ny olona dia naniry ahy ary izaho dia nifantoka tamin'io. Ny fianakaviako dia niaraka tamiko foana, ny sipako foana dia nanosika ahy hiverina. Ary mazava ho azy fa sarotra ny ho ela loatra fa ny baolina kitra. "
FACT CHECK: Misaotra noho ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Erik Lamela momba ny tantaram-pianakaviana sy ny zava-misy marina momba ny biographie. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
Jan Vertonghen ny tantaram-pitiavam-pitiavan'olon-tiana Plus Plus momba ny tantaram-piainana
Aprily 2, 2018
Janoary 5, 2017
Desambra 7, 2017
Gabriel Batistuta ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-pitiavana tsy hita isa